ဧရာဝတီ - ရုပ်/သံ: U Ye Htut Speaks About Kachin War
U Ye Htut Speaks About Kachin War
why are interviewers are not showing their faces ?
look army ye htuh,his face clearly look,so fat right,but the lie guy is his face,he is thinking to lies for interview.I hate guy,min zaw too
this guy is to thinking to lie and interview.U ye htuh and min zaw.I hope burma army and those two guy to go hell.
Rubbish! Ye Htut's view and explanation are no more than potatoes.
အပစ်အခတ်ရပ်စဲအရင်လုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး နိုင်ငံရေးကို ဘယ်အချိန်လောက်မှ ဆွေးနွေးမလဲ။
နောက်အနှစ် ၁၀၀လောက်မှလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီအစိုးရ သက်တန်းကုန်ဆုံးမှလား။
အခု လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တော်တော်များများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ယူထားပြီးပြီ။
ဘယ်တော့လောက် နိုင်ငံရေးကို ဆွေးနွေးမလဲ။
ကချင်က ဖမ်းဆီးထိမ်းထားတဲ့ စစ်သုံ့ ပန်း တွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်မှ စစ်သားတွေ အကြောင်း ဘာဖြစ်လို့ မမေးတာလဲ- မေးပါလျှက်နဲ့ဆင်ဆာထိလို့ ပြုတ်ကျနေခဲ့တာလား- အဲဒီ အထဲမှာ ကလေးစစ်သားတွေ ပါတယ်ဗျ- အစိုးရ ၀န်ကြီး ဘယ်လို ဖြီးမလဲလို့ သိချင်လို့ ပါဗျာ-
dog ye htut.i don't believe that lie.
ဆွေးနွေးပွဲမှာ အကြပ်ကိုင်ဖို့ အတွက် တဘက်ကစစ်ရေးအရ ဖိအားပေးတာပါ လာအာမနေနဲ့မင်းတို့ ဒီအကွက်ဆင်လာတာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး
I like to know the foreign country,how many millitary forces in their country?As an American
the great democracy (us) have us forces than other
millitary forces.Are the foreign country need realnpeace in myanmar?Most of the peoples have optimist and love judge & no bias.
We are myanmar public,living in myanmar country,we hate insergent & destry also inbad minded.All the peace protester can protest along from Myitkyina to Liza,not in other places,try your best with purified heart,not ill